Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Windproof PVC Stacking Door China Manufacturer
Nkọwa:Ụlọ ahụ na-ekpuchi windo nke aluminium,Ọnụ Ụzọ Mgbochi Rapid maka nnukwu ụlọ ọrụ,Ụlọ Elu Pvc Ụlọ Elu
Home > Ngwaahịa > Ọnụ Ụzọ Dị Elu > Ọnụ ụzọ nkwụsị elu > Ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Windproof PVC Stacking Door
Ihe Nlereanya.: HF-J 522
T ọ ulo oru stacking ụzọ nwere ọrụ dịgasị iche iche ndị dị otú ahụ dị ka okpomọkụ ichebe, oyi na-atụ ichebe, ụmụ ahụhụ na ihe àmà, windproof, dustproof na soundproof. O nwere ike izute nhazi akụrụngwa dị elu na ebe obibi nhicha, chebe ike ma melite oyi. Nwepu na mmechi oghere dị elu, melite arụmọrụ ọrụ na àgwà gburugburu ebe obibi. Ọnụ ụzọ na-ebu ọnụ na-adaba maka ọnụ ụzọ buru ibu ma nwee ike ijide ifufe na-agba ọsọ n'elu ogo 10.
- Ihe ngosi ngwaahịa anyị:
Ezigbo oghe: a ghaghị mepee ọnụ ụzọ niile na-ekpo ọkụ ngwa ngwa iji hụ na ngwa ngwa na ịrụ ọrụ nke ọma na ike ịzọpụta.
Meghee ụzọ ịkwụsị ma debe ihe mkpuchi nke shutter n'ụzọ dị mkpa iji hụ na usoro nke imechi akpa ahụ. Nke a bụ ihe na-akpụ akpụ ma ọ bụ òkè nke nkwekọrịta nta: iji nchebe eme ihe.
Mgbochi imetụta: Mgbe mmechi shutter ụzọ ma ọ bụ nkwekorita, usoro mwepụ akpaka na ngwaọrụ nrụghachị ga-arụ ọrụ na ọnụ ụzọ mgbe mmetụta nke na-achọghị ngwaọrụ pụrụ iche iji weghachite ọnọdụ ọrụ n'oge na-adịghị anya.
Ịdabere: ngwa ngwa shutterdoors ga-enwe atụmatụ eletriki na ntuziaka iji jide n'aka na n'ime ahụ nwere ike iji aka.
Na - eji ígwè ọkụ eletrik SNMA nke Taiwan, ike isi 220V, ike 0.75kw, ibu na-ebu ubu S4 nke ukwuu.
2) Usoro nchịkwa a na-ahụ maka ihe ọkụkụ
Na-eji Denish Danish Ọ bụrụ na igbe nkwado nkwado dị elu, na nhazi na ụkpụrụ njikwa ihe ndị ahụ, njikwa njikwa dị elu; Onye na-agbanwe agbanwe ugboro ugboro (150% 1Hz), PLC na-ejikọta, nwere arụmọrụ dị elu, ntọala siri ike, nkwụsi ike dị elu, àgwà dị elu, ebe dị elu. Ugboro oge na-ejikwa nkà na ụzụ na-agbanwe agbanwe ugboro ugboro, nwere mmalite dị nro, ọrụ nkwụsịtụ ngwa ngwa , mkpuchi ọnụ ụzọ ahụ na-agbanwewanye ndụ ọrụ.
3) ọsọ ọsọ
0.4-0.8m / s ọsọ ọsọ (edozi). Ogologo oge mmeghe (1000-1500 / ụbọchị)
4) Ngwa nchekwa
N'akụkụ ala nke ụzọ ọnụ ụzọ na-eme ka nchebe foto nke ikuku infrared gbanwee otu ụzọ, n'okpuru ọnụ ụzọ ámá ahụ kwụsịtụ mgbe mmadụ na ihe na-egbochi ese foto, ọkpụkpụ ụzọ abụghị ebe. (South Korean Otto Nix)
5) Ọfụma na-arụ ọrụ na ifufe
A na-ejide windo ígwè ntanye ákwà ntanchi ákwà, ihe nrịbawanye na-ebute ifufe .
--- Nchịkọta ndị ọkachamara:
--- nkọwa ngwaahịa:
1. Ọkwọ ụgbọ mmiri
Ejikọtara ihe mkpuchi ahụ na ngwongwo ígwè ma ọ bụ windo arụmọrụ aluminom na windo ikuku iji mee ka mmetụta nkwụsi ike nke ifufe.
A na-ese ya na galvanized ígwè na mara mma, inogide ma na-eyi na-eguzogide ọgwụ. N'iji teknụzụ welding elu, ihe a na-adịgide adịgide, ọ naghị adịrị mfe iji gbajie agbaji
Ọkụ ahụ e wuru n'ime okporo ígwè ahụ nwere ike ịrụ ọrụ na-ekpuchi ya.
4. Ele anya windo
A na-eji windo PVC nke nwere okpukpu kpụ ọkụ n'ọnụ na-ekpuchi ya na 1.2mm, na-eme ka ọ dịkwuo ala maka ugbo ala na ugbo iji banye ma wepu.
PVC mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na-ekpuchi ọnụ ụzọ Kpọtụrụ ugbu a
Ogwe Mkpụrụ Obi na Nchekwa Kpọtụrụ ugbu a
Ogweaka akpaaka Servo Motor and Control Box Kpọtụrụ ugbu a
Hoto akpaaka akpa nkuku na igbe Kpọtụrụ ugbu a
Ụlọ ahụ na-ekpuchi windo nke aluminium Ọnụ Ụzọ Mgbochi Rapid maka nnukwu ụlọ ọrụ Ụlọ Elu Pvc Ụlọ Elu Ụlọ ahụ na-ekpuchi windo nke Aluminom Ụlọ ahịa ọhụụ na-ekpuchi ikuku Ụlọ ahụ na-eme ka ụlọ nchekwa dị na alumini Ime ụlọ na-ekpuchi windo Ụlọ mpụ na mkpuchi ime ụlọ